အိမ် > အွန်လိုင်း အာမခံ စာရင်းသွင်းခြင်း
အွန်လိုင်း အာမခံ စာရင်းသွင်းခြင်း
OMRON ထုတ်ကုန်များကို အားပေးခြင်းအတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သင့် ထုတ်ကုန်ရဲ့ အာမခံ စာရင်းသွင်းခြင်း ပြုလုပ်ရန် ထုတ်ကုန်၏ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပါ။
အွန်လိုင်း အာမခံစာရင်းသွင်းခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခွင့်ရ ကုန်သည်များထံမှ ဝယ်ယူသော ထုတ်ကုန်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ အွန်လိုင်းစာရင်းသွင်းခြင်းတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါက(95) 9967251713 သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ Healthcare-MM@omron.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Title* -- Mr. Ms. Mrs. Mdm. အမည်* ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်* အီးမေးလ်* ထုတ်ကုန် အမျိုးးအစားများ* -- - သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းခြင်း - အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှု - ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းတာခြင်း - ကိုယ်အလေးချိန် တိုင်းတာခြင်း - နာကျင်မှုကို ကုသခြင်း
ထုတ်ကုန် မော်ဒယ်* -- ထုတ်ကုန်အစဉ်လိုက် နံပါတ်* ဝယ်ယူခဲ့သည့်မြို့ရွေးရန်* -- Select -- Bago (Pegu) Dawei (Tavoy) Hinthada Hpa-an (Pha-an) Lashio Loikaw Magway (Magwe) Mandalay Maubin Mawlamyine (Moulmein) Meiktila Mogoke (Mogok) Monywa Mudon Myanaung Myeik (Mergui) Myitkyina Naypyitaw (Pyinmana) Pakokku Pathein (Bassein) Pyapon Pyay (Pyè, Prome) Pyin Oo Lwin (Maymyo) Sagaing Shwebo Sittwe (Akyab) Tachileik Taunggyi Taungoo (Toungoo) Yangon [Rangoon] Others ဝယ်ယူသည့်နေ့စွဲ*
ကျေးဇူးပြု၍ ပြေစာစာရွက်ကို ပြပါ။ *
*Maximum file size: 5MB; File format: PDF, JPEG & PNG Invalid file format. Valid file extension is: PDF, JPEG & PNG. File size exceeded. Maximum file size limit for upload:5MB.
ဒီထုတ်ကုန်ကို သင် ဘယ်က ဝယ်ခဲ့သလဲ* -- City Care ဆိုင်ခွဲများ ရွှေအိုး ဆိုင်ခွဲများ Medicare ဆိုင်ခွဲများ ဆေးဆိုင်များ ဆေးကိရိယာအရောင်းဆိုင်များ ဆေးရုံဆေးခနိးရှိဆေးဆိုင်များ အွန်လိုင်းစတိုး - City Mall အွန်လိုင်းစတိုး - Shop.com.mm အခြား
သင့်အကြောင်းကို ကျွနိုပ်တို့ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
MM 1234567 8910 11 12 YYYY 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OMRON အကြောင်း ဘာတွေကြားဖူးလဲ* သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်း ရုပ်မြင်သံကြား ရေဒီယို သူငယ်ချင်း/ မိသားစုက ညွှန်းလို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ ဆေးဆိုင် ဝက်ဆိုဒ် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ရှာဖွေမှုရလာဒ် အခြား
သင် ဘာကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ကို ဝယ်ယူရသလဲ။* ဆရာဝန်မှထောက်ခံခြင်း ကျွနိုပ် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်း ထိရောက်မှုကို သိရှိစေရန်။ ကျွနိုပ်၏ သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်တိုင်းရန် သွေးတိုးရောဂါ ကုသမှုကို ပိုထိရောက်စေရန် လက်ရှိသွေးပေါင်ချိန်စက်နေရာတွင်အစားထိုးသုံးရန် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးရန် မိမိသွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ခြင်း အခြားသော အကြောင်းပြချက်
Nebulizer ကို သင်ဘာကြောင့်ဝယ်ရသလဲ* ရင်ကျပ်ရောဂါကို အိမ်တွင်ကုရန် ချောင်းဆိုး၊ အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာကို အိမ်တွင်ကုရန် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ ဝယ်ယူရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ပိုဆိုးမလာစေရန် အခြားသော အကြောင်းပြချက်
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များထဲတွင် သင့် OMRON ကို ရွေးချယ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း ၃ ခု ကို ရွေးပါ။* သုံးရလွယ်ကူခြင်း စိတ်ချရသည့် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခြင်း ထုတ်ကုန် အင်္ဂါရပ်များ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း သူငယ်ချင်း/ မိသားစုမှ ထောက်ခံခြင်း ဆရာဝန်မှထောက်ခံခြင်း ဆေးဝါးပညာရှင်/အရောင်းဝန်ထမ်းမှထောက်ခံခြင်း စျေးလျော့ပေးခြင်း စျေးနှုန်းသင့်တော်ခြင်း ကွာလတီကောင်းခြင်း ဤအမှတ်တံဆိပ်တခုတည်း ဝယ်ယူ၍ရခြင်း အခြား
ကျွနု်ပ်တို့ဆီက အချက်အလက် အသစ်ကို လက်ခံလိုပါသလား။*
သတင်းအချက်အလက်နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း အချက်အလက်အသစ်များ ပေးပို့လိုပါသည်။ အချက်အလက် အသစ်များ လက်မခံလိုပါ။အခြားမည်သည့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများနှင့်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုခြင်းသဘောမတူပါ
OMRON ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုမှ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ I accept ဟူသော ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများကို ဖတ်ရှုပြီး လက်ခံလိုက်နာနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ သင်၏ အချက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လွှဲပြောင်းယူသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။*
ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သောမူဝါဒကိုကျွန်ုပ်လက်ခံသည်။ ဒီမှာ. အာမခံစာရွက်တွင် ပါဝင်သော အသုံးအနှုန်းများနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေများကို လက်ခံပါသည်။ ဒီမှာ. မှတ်စု၊ အာမခံစာရွက်တွင် ပါဝင်သော အသုံးအနှုန်းများနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေများကို လက်ခံရန် Here ဟု ရေးထားသော နေရာကို နှိပ်ပါ။
This product is valid for local warranty. Please continue to fill in the form.
We are unable to register your warranty.
This product is already registered for local warranty.